अण्डरटेकरले गरे डब्ल्यूडब्ल्यूइ यूनिभर्सबाट सन्यास लिएको घोषणा Canada Nepal
Jan 20 2021 | २०७७, माघ ७गते
२०७७, माघ ७गते
अमेरिका राष्ट्रपति शपथः ट्रम्प बाहिरिए, बाइडनको आउँदो कार्यकालको स्वागत
सभापति देउवाद्वारा वडामा आयोजना गर्ने विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह
अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगरे पार्टी जनअदालतमा जान्छ - उपेन्द्र यादव
चलचित्र 'घिन्ताङ' मा अभिनय गर्दै धमला पत्नी एलिजा गौतम
नेपालमा ९७.९ प्रतिशत कोरोना संक्रमित निको, सक्रिय संक्रमित कति ?
आजबाट विश्व शक्तिशाली अमेरिकाको बागडोर बाइडेनको हात, जान्नुहोस् उनको तलब र सुविधाको विवरण
कमल थापाले भने - प्रतिनिधिसभा विघटनवारे विवाद र फरकमत हुनु स्वाभाविक हो
अण्डरटेकरले गरे डब्ल्यूडब्ल्यूइ यूनिभर्सबाट सन्यास लिएको घोषणा
काठमाडौं । चर्चित रेसलिङ लेजेण्ड द अण्डरटेकरले डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिभर्सबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन् ।
५५ वर्षका अण्डरटेकरले आइतबार डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिभर्सबाट सन्यास लिएका हुन् । १९९० नोभेम्बर २२ देखी रेस्लिङ सुरु गरेका अण्डरटेकरले सन्यास लिदा ३० बर्ष पुरा भएको छ ।
सर्भाइभर सीरीजको बेला सन्यास लिएका उनले भावुक हुँदै रिंगमा मेरो समय सकियो भनेका छन् ।
उनले भने रिंगमा मेरो समय सकियो । अब अण्डरटेकरलाई बिदाइ गर्नुहोस् । अण्डरटेकरले हालसम्म ७ पटक डब्ल्युडब्ल्युई च्याम्पियनशिप जितिसकेका छन् ।
An Icon. A Legend. One of
The Greatest To Ever Lace His
Boots In #WWE. #ThankYouTaker!#SurvivorSeries pic.twitter.com/CAgIVC7TBi
— The New Era (@ConnectWWE) November 23, 2020
मंसिर ९, २०७७ मंगलवार १०:२४:४४ बजे : प्रकाशित
जर्मन बुन्डेसलिगामा डर्टमन्ड पराजित
काठमाडौं - गए राति जर्मन बुन्डेसलिगा अन्तर्गत भएको खेलमा लिभरकुसनले सानदार जित निकालेको छ ।
निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको उक्त खेलमा लिभरकुसनले बोरुसिया डर्टमन्डलाई २–१ गोलले पराजित गरेको हो । उक्त खेलको पहिलो हाफमा नै लिभरकुसनले अग्रता पायो ।
खेलको १४ औं मिनेटमा लिभरकुसनका मौसा डियाबीले गोल गरी टिमलाई अग्रता दिलाए ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा डर्टमन्डका जुलियन ब्रान्ड्टले र लिभरकुसनका फ्लोरियान विर्ट्जले गोल गरे । जितसँगै लिभरकुसन बुन्डेसलिगाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ।
माघ ७, २०७७ बुधवार ०९:२४:२१ बजे : प्रकाशित
# जर्मन बुन्डेसलिगा
भारत–अस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट : भारतको रोमाञ्चक जित
ब्रिस्बेन, एएफपी – भारत र अस्ट्रेलियाबीचको चौथो तथा अन्तिम टेस्ट क्रिकेटमा भारतले रोमाञ्चक जित हासिल गरेको छ । यो जितसँगै भारतले चार टेस्टको शृंखला २–१ ले जितेको छ ।
ब्रिस्बेन क्रिकेट मैदानमा अस्ट्रेलिया सन् १९८८ पछि पहिलो पटक भारतसँग पराजित भएको छ ।
पाँचौं दिन ४ रनबाट खेल्न थालेको भारतले अस्ट्रेलियाले प्रस्तुत गरेको ३२८ रनको चुनौती ३ ओभर बाँकी रहँदा सात विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो । अन्तिम ३ ओभरमा भारतलाई जितका लागि ३ रन चाहिएको अवस्थामा रिषभ पन्तले विजयी चौका प्रहार गरेका थिए ।
भारतका लागि रिषभ पन्तले अविजित ८९ रन बनाएका थिए । भारतका लागि अन्य खेलाडीहरु शुभमन गिलले ९१, चेतेश्वर पुजाराले ५६, कप्तान अजिन्क्य रहाणेले २४, मयन्क अग्रवालले ९, वासिङटन सुन्दरले २२, रोहित शर्माले ७ र शार्दुल ठाकुरले २ रन बनाएका थिए ।
ब्रिस्बेनको गाब्बा क्रिकेट मैदानमा यतिठूलो स्कोर पछ्याएर कुनै पनि टिमले खेल जितेको यो पहिलो अवसर पनि हो । भारतका पन्तले प्लेयर अफ द म्याच तथा अस्ट्रेलियाका प्याट कमिन्सले प्लेयर अफ द सिरिजको पुरस्कार पाए ।
अस्ट्रेलियाले पहिलो इनिङमा ३६९ तथा दोस्रो इनिङमा २९४ रन बनाएको थियो भने भारतले पहिलो इनिङमा ३३६ तथा दोस्रो इनिङमा ३२९ रन बनाएको थियो ।
माघ ६, २०७७ मंगलवार १३:५८:२९ बजे : प्रकाशित
# भारत–अस्ट्रेलिया टेस्ट
इटालियन सिरी ‘ए’ : ज्लाटनको गोलमा एसी मिलानको सहज जित
काठमाडौं - गए राति इटालियन सिरी ‘ए’ अन्तर्गत भएको खेलमा एसी मिलानले सानदार जित निकालेको छ ।
निकै रोमान्चक बनेको उक्त खेलमा एसी मिलानले क्याग्लिएरीलाई २–० गोलले पराजित गरेको हो ।
उक्त खेलको सातौ मिनेटमा मिलानका ज्लाटन इभ्राहिमोभिचले गोल गरी टिमलाई अग्रता दिलाए । उनले पेनाल्टीमार्फत गोल गरेका हुन् । त्यसपछि खेलको ५२औं मिनेटमा ज्लाटनले नै अर्को गोल गरी मिलानलाई जित दिलाए ।
जितसँगै मिलानले १८ खेलबाट ४३ अंक जोड्दै शीर्षस्थानमा ३ अंकको अग्रता लिएको छ । पराजित भएको टिम क्याग्लिएरी १४ अंकसहित १७औं स्थानमा रहेको छ ।
माघ ६, २०७७ मंगलवार ०८:२२:०० बजे : प्रकाशित
# एसी मिलान
# इटालियन सिरी ‘ए
# ज्लाटन इभ्राहिमोभिच
इंग्लिस प्रिमियर लिग : पिएरेको गोलमा आर्सनलको सानदार जित
काठमाडौं - गए राति इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत भएको खेलमा आर्सनलले सानदार जित निकालेको छ ।
निकै रोमान्चक बनेको उक्त खेलमा आर्सनलले न्यूक्यासललाई ३–० गोलले पराजित गरको हो ।
उक्त खेलको ५० औं मिनेटमा आर्सनलका पिएरे एम्रिक औबामियाङले गोल गरी टिमलाई अग्रता दिलाए । त्यसपछि खेलको ६० औं मिनेटमा बुकायो साकाले गोल गरी आर्सनललाई अग्रता दोब्बर बनाए ।
त्यसपछि खेलको ७ औं मिनेटमा पिएरेले अर्को गोल गरी टिमलाई जित दिलाए । जितसँगै आर्सनल १९ खेलमा २७ अंक जोड्दै १० औँ स्थानमा उक्लिएको छ । पराजित भएको टिम न्यूक्यासल १५ औँ स्थानमा छ ।
माघ ६, २०७७ मंगलवार ०७:५२:४० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने अस्ट्रेलियामा जारी बिग बास लिगमा लगातार दोस्रो खेलमा पनि विकेटविहीन रहेका छन् ।
होबार्ट हुरिकेन्सबाट बिग बास लिग खेलिरहेका लामिछाने आज पनि सिड्नी थन्डर्सविरुद्धको खेलमा विकेट लिनबाट चुके । खेलको पाँचौँ ओभरमा बलिङ गर्न आउनुभएका उनले सो ओभरमा छ रन खर्चिए ।
आफ्नो दोस्रो ओभरमा लामिछानेले विपक्षी खेलाडीलाई नौ रन दिए। तेस्रो ओभरमा उनले पाँच रन मात्र खर्चिए भने चौथो ओभरमा लामिछानेले आठ रन दिए । होबार्टका लागि उनले चार ओभर बलिङ गर्दै २८ रन खर्चिए ।
यसअघि पर्थविरुद्धकै खेलमा लामिछाने विकेटविहीन रहेका थिए । उक्त खेलमा उनले विपक्षी खेलाडीलाई चार ओभरमा २३ रन दिएका थिए । अघिल्ला तीन खेलमा गरी हाल जारी बिग बासमा लामिछानेले चार विकेट लिएका छन् । लामिछाने आबद्ध होबार्ट आजको खेलमा विजयी भएको छ ।
योसँगै होबार्ट लिगको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ । होबार्टले हालसम्म खेलेका ११ खेलमध्ये छ मा जीत तथा पाँचमा हार बेहोरेको छ । होबार्टले कूल २३ अङ्क जोडेको छ ।रासस
माघ ५, २०७७ सोमवार २१:१०:१३ बजे : प्रकाशित
# बिग बास लिग
इटालियन सिरी ‘ए’ : युभेन्ट्स पराजित
काठमाडौं - गए राति इटालियन सिरी ‘ए’ अन्तर्गत भएको खेलमा साविक विजेता युभेन्ट्स पराजित भएको छ ।
निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको उक्त खेलमा युभेन्ट्स इन्टर मिलानसँग २–० गोलले पराजित भएको हो ।
उक्त खेलको १२ औं मिनेटमा इन्टर मिलानका आर्टुरो भिडालले गोल गरी टिमलाई अग्रता दिलाए । त्यसपछि खेलको ५२ औं मिनेटमा निकोलो बारेल्लाले गोल गरी इन्टर मिलानलाई जित दिलाए ।
जितसँगै इन्टरले ४० अंकसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ । इन्टरले शीर्ष स्थानको एसी मिलानसँग अंक बराबरी गरेको छ । पराजित भएको युभेन्ट्स भने ३३ अंकसहित पाँचौ स्थानमा रहेको छ ।
माघ ५, २०७७ सोमवार ११:१०:२४ बजे : प्रकाशित